Garacad oo Lagu soo Gabagabeeyay Shir Looga Soo Horjeedo Burcadbadeeda [Cod+Sawiro] • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Garacad oo Lagu soo Gabagabeeyay Shir Looga Soo Horjeedo Burcadbadeeda [Cod+Sawiro]
Tagged With: Garacad
Garacad oo Lagu soo Gabagabeeyay Shir Looga Soo Horjeedo Burcadbadeeda [Cod+Sawiro]
December 25, 2011 - By: Abdirizak Shiino
Shir balaaran oo looga soo horjeedo kooxaha burcad-badeeda soomalida ayaa lagu qabtay deegaanka garacad oo hoostaga degmada jariiban ee gobalka mudug
Ajandaha Ugu Weyn ee Shirkan ayaa ahaan soo afjarida kooxaha burcad-badeed soomalida oo Mudo 6 sano ah saldhigyo Ka dhigtay deegaanka garacad & dagmada Jaariiban, Iyadoo Kulankan ay soo qaban qaabiyeen bulshada deegaanka oo dareemay huqda iyo xanuunka daran ee deegaanka Garacad & dagmada jariibaan ay ku hayaan burcada naafeeysay Amniga iyo kala danbaytii deegaanka ..
Kulan weynahan ayaa Waxaa gob joog ka ahaa Gudoomiyaha Dagmada Jariiban Ee Gobalka Mudug , Gudoomiyhii Hore ee dagmada Jariiban Haatana ah afhayeenka shirka aqoonyahano, Culumaaudiin, dhalinyaro & haween Xiran Maryo ay ku xardhanyihin calanka dalkeena hooyo ee soomaliya , Waxana shirkaasi intii uu socday Laga soo saaray qodobo kala duwan oo ay ka mid tahay In gacan buxdo Lagula dagaalamo burcad-badeeda , Sugida amaanka Deegaanada garacad & dagamada jariibaan.
Kulan waxaa Ugu Horeyntii daah furay Gudoomiyaha dagmada jariiban ee gobalka mudug C/kariin keyntoon oo ku dheeraday ka hadlida Waxqabadka maamulkiisa Isagoona tilmaamay In maamulkiisu uu hormar ka sameeyey sugida amaanka, Ladagaalanka burcad badeeda hormarinta adeegyada bulshada Waxbarashada iyo caafimaadka.
Gudoomiye Kaytoon ayaa sidoo kale ka haday dhibaatada ay ku hayeen burcad-badeeda degmada jariiban isgaoona sheegay in ay saamayn weyn u gaysteen nolashii caadiga ahyd ee dadka ku nool deegaanada hoostaga demada jariiban ee gobalka mudug.
Gudoomiyihii Hore ee dagmada Jariibaan ahna afhayeenka shirka Cabdi casiis aw yuusuf Xaarin ayaa isna Wax ka tilmaamay qodobadii ay soo saareen Waxgardka Deegaanka Isagoo Furitaanka hadalkisa ku sheeegay In ay ayid sanyihiin Shirka wadatashiga dhinacyada Siyaasada somaliya oo ka lagu qabtay magaalada garoowe caasimada
Xaarin ayaa sidoo kale soo hadal qaaday qorsha ay degmadu ka damacsantahay in deegaanka garacad loo sameyo marsad ay ku soo xirtaan maraakiibta si dhaqaalaha iyo hormarka deegnku uu u kobco dhalinyaraduna ay u helaan xirfado kala duwan .
Maxamuud Jaamac Diirshe Farey oo ka mid ah odayaal dhaqmeedkla degmada jariiban ayaa isna shirkan ka hadlay waxaana uu ku dheeraaday dhibaatada burcad-badeedaay u gaysatay degmada jariiban isagoona sheegay in ay curyaamiyeen hormarkii deegaanka iyo nolashii dadka.
Nabadoon Farey ayaa sidoo kale ugu baqay dhamaan hay’adaha iyo dawlada soomaliyeed in ay yimaaden deegaanka si ay u arkaan hormarkla iyo sida ay ula dagaalameen burcad-badeeda , haatana ay degmadu tahay mid ka nabad gashay dhibaatooyinkii burcada.
Siciido Cabdi Cilmi oo ku hadlaysay ururka haweenka degmada jariiban ayaa iyana ka hadashay shirka, waxana ay ka warbixisay qaabkii ay ku bilaabatay burcadbadeeda deegaanka garacad iyadoo tilmaantay in ay dhibaato kala duwan kala kulmeen maraakiibta shisheeye ee ku sugan xeebaha soomaliya.
Siciido ayaa sidoo kale sheegtay in haatan la soo gaaray waqtigii u danbeeyay ee kooxaha burcadbadeeda isla markaana ay dhalinyaradii ka tanasulen falalkii burcadbadeeda ee ay ka gaysanayeen biyaha u dhaw soomaliya.
Intii uu socday shirkan waxaa kaloo ka hadlay qaar ka mid ah ururada dhalinyada degmada jariiban iyo odayaal kale oo ka socday deeganada kale ee gobalka mudug.
Ugu danbaytiina waxaa uu shrkan ku soo dhamaaday Guul iyo in burcadbadeeda laga saaro deegaanka garacad ,iyadoo qaar badab oo kamid ah dhalinyaradii burcad-badeeda ahaydna ay ka tanaasuleen falalkii ay ku jireen ee burcad-badeednimada.